7'जला गर्न s | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! 7'जला गर्न s | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
7'जला गर्न s
सबै स्लट मिसिन विभिन्न बोनस राउंड्स बोक्न, छरिन्छ र wilds. 7को जला एक यस्तो simplistic मोबाइल स्लट धेरै राम्रो क्लासिक विषय प्रतिनिधित्व गर्ने खेल छ.
वैज्ञानिक खेल जो उच्च प्रविधिको घमण्ड र खेलाडीहरूलाई उत्साह प्रदान स्लट प्रदान. कम्पनी सुरक्षित तत्काल लटरी खेल तरिका फिर्ता सिर्जना गर्न पहिलो थियो 1974.
यो अनलाइन स्लट द्वारा प्रस्तावित सट्टेबाजी दायरामा 25p छ2स्पिन गर्न. यसबाहेक, तपाईं नमस्ते रोलर को विकल्प कि खर्च हुनेछ Spins छ 20 अतिरिक्त लाभ संग पाँच spins लागि. त्यहाँ केवल तीन रील र यो अनलाइन स्लट पाँच स्थिर जीत रेखाहरू छन्. को प्रतीक को सबै भन्दा जोडी छन् र सुन्ताला समावेश, चेरी, तरबूज, डबल बारहरू, तारा, Bells, प्लम, कागति. यी प्रतीक अलग्गै, त्यहाँ एउटा 77 रातो रंग र पनि तातो जलिरहेको मा प्रतिमा 77 प्रतिमा. दुवै सामान्य 77 प्रतीक र जलिरहेको 77 को wilds रूपमा प्रतीक कार्य, अन्य सबै प्रतीक लागि स्थानापन्न. दुई बीच मुख्य विपरीत तिनीहरू प्रस्ताव भुक्तानी छ. सामान्य गर्दा 77 प्रतिमा तपाईं एक हुन्छ 100 एक जीत लाइन मा लैंडिंग तिनीहरूलाई तीन लागि पटक Jackpot, जलिरहेको 77 प्रतिमा पुरस्कार तपाईं एक 250 पटक जीत लाइन मा रही तीन लागि Jackpot. अन्य अनलाइन खेल विपरीत, तिनीहरूले कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जो निर्णय खेलाडी छ.
यो अनलाइन स्लट मा वैकल्पिक अतिरिक्त सुविधाहरू समावेश:
1. नमस्ते रोलर Spins- यी उच्च संचालित spins मानक शर्त भन्दा तपाईं अधिक खर्च र सामान्य पुरस्कार तपाईं आधा प्राप्त हुनेछ. तर, त्यहाँ यी पाँच नमस्ते रोलर Spins जलिरहेको छ रूपमा उच्च विजेता अवसर प्राप्त एक ठूलो मौका छ 77 अन्य सबै प्रतीक लागि स्थानापन्न प्रतीक.
2. गैंबल विशेषता- एक स्पिन समयमा, खेलाडी को गैंबल विकल्प लिन निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ. यो विकल्प लिन, एक स्पिन प्रगतिमा हुँदा बस गैंबल बटन मारा. तपाईं र तपाईं जीत यदि 2x भुक्तानी प्राप्त यदि तपाईं जीत छैन, त्यसपछि केही परिवर्तन गरिएको छ.
यो अनलाइन स्लट एक uncomplicated खेल जो तिनीहरूले राउन्ड वा बोनस लागि जान चाहनुहुन्छ भने खेलाडीहरू कल लिन अनुमति दिन्छ. यो मोबाइल स्लट खेल द्वारा प्रस्तावित खेलाडी प्रतिशतमा फिर्ती छ 95.10%.